Thank You Visited My Blog.
ဒီနေ့တော့ ချက်နည်းပြုတ်နည်းစာအုပ်လေးတွေကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခြားခြားသောချက်နည်းပြုတ်နည်းစာအုပ်များဝက်ဆိုဒ်များရှိပါကလည်း ဒီပိုစ့်အောက်မှာ ကော့မန့်ထားပြီးရှယ်ယာလုပ်ပေးပါအုန်း။
စာအုပ်အမည် – Lu Lu Cooking Bookစာရေးသူ – လုလုRead Online – Google Document Scribd DocumentCredit To – www.lulucooking.blogspot.com အထက်ဖော်ပြပါ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်လေးမှာနောက်ထပ်ချက်နည်းပြုတ်နည်းများကို ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်အမည် – ချက်နည်းပြုတ်နည်းများ (မူရင်းစာအုပ်အမည်ရှာမတွေ့လို့ဒီအတိုင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်)စာရေးသူ – မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းDownload - Google Document(online reading is not available due to big file size )Credit to - မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ၊ စကားဝါမြေစာကြည့်တိုက် ဒီစာအုပ်လေးဟာ ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေတင်မကပဲ အခြားအိမ်တွင်းမူအနုပညာတွေဖြစ်တဲ့ လက်ကိုင်ပ၀ါခေါက်နည်း၊ အသားနွာနည်းနည်းများ နဲ့ အခြားခြားသော ဗဟုသုတအများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။
စာအုပ်အမည် – မြန်မာကျူးပစ်ဒ် ဟင်းချက်နည်းများစာရေးသူ – မြန်မာကျူဒ်ပစ်ဒ်ဖိုရမ်Read Online - Scribd Document Google Document Credit to – မြန်မာကျူးပစ်ဒ်ဖိုရမ် ဒီစာအုပ်လေးမှာ မြန်မာကျူးပစ်ဒ်ဖိုရမ်ရဲ့ ချက်နည်းပြုတ်နည်းလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးက ၂၀၀၈ ခုနှစ်ရဲ့ ၀ိညာဉ်သစ် Top 10 Most Reading Books of the Year မှာ နံပါတ်5ချိတ်ခဲ့ပါတယ်။
စာအုပ်အမည် – အဓိပတိ ဟင်းချက်နည်းများစာရေးသူ - နန်းစန်းစန်းအေး (အဓိပတိ ဖြူး)Read Online – Google Document Scribd Document Credit to - လင်းထက်ဖိုရမ် ။ စကားဝါမြေ
Posted by chit oo May at 7:38 PM
powered by Football Betting
"Football Results For You"
Get the Football Results widget and many other great free widgets at Widgetbox! Not seeingawidget? (More info)
WOW! Internet & Games Center
အစ္စလာမ် ဘာသာ သမိုင်း - အစ္စလာမ် ဘာသာရေး သဘောထားများ
"Shinn Thent 's Photos"
`ဥပဒေ´ ၏ အထက်တွင် မည်သူမျှ မရှိစေရ
swiss software သုံနည်းလေးသိချင်သူအတွက်
Adobe Reader 10.1.2 (1)
anty vious (1)
Atomix Virtual DJ Pro 6.1 (1)
Audio Sound အသံပိုင်းပြဿနာဖြေရှင်းနည်း (1)
Blue Screen Error ဖြေရှင်းနည်းများ (1)
C++ Complete (1)
G -mail (8)
G -Talk (5)
internet downloader (1)
Microsoft Security Essentials 2.1.1116 Vista / window7for 32-bit (1)
Page Maker 7.0 (1)
Web Links (14)
Winrar 4.10 (1)
ကိုယ်ဘယ်အချိန် သေမလည်းတွက်ကြည့်မလား (1)
ကော်နက်၇ှင် မကောင်း၇င် ကျော်ခွသုံးလို့ ၇မယ့် ဆိုဒ်များ (1)
free counter | William hill casino | METATRADER | Swisscasino | William hill casino bonus
G-Mail Account Lock ကျသွားလျှင်ဖြေ၇ှင်းနည်း
Gmail Notifier Pro 3.1.1
Google Earth Plus 6.0.2.2074
''တန်ဖိုး'' များသော ဘလော့ပို့စ်
GSM ဖုန်းမှာ Internet သုံးမယ်... by DD85 - mmcpcom...
သုံးရက်ကြာ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစား၍ သေဆုံး
ဒီ Software လေးကတော့ နာမည်ကြီးပါတယ်..။
Hacking & Cracking ဆိုတာ
Software များကို Crack လုပ်နည်းမျိုးစုံ
Desktop ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Gif ဖိုင်ပုံလေးတင်ကြည...
Quick Format နှင့် Regular Formatအကြောင်း
ကွန်ပျူတာShutdown လုပ်သည့်အချိန် ကြာမြင့်လွန်းလျှင...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ
ထိုင်းရေဘေးသင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ဒုက္ခ
Windows7Repair Disc ဖြင့် Windows ပြန်မတက်တဲ့ ပြ...
5 seconds အတွင်းWindows Genuine လုပ်ရအောင်
(တကယ်မဟုတ်သော)ပညတ် နှင့် (အစစ်အမှန်)ပရမတ် တို့ တန်...
ပညတ်မျိုး ၆-ပါး။ ။
Tsunami (Phuket Beach)
အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေးများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နို...
"SKODENG" catched in CHINA!
လူဦးရေ သန်း ၇ ထောင် နှင့် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု
Ubuntu 11.10 အသစ်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် တွေ တင်မယ်...
LINUX ပြောင်းသုံးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
မိန်းကလေးငယ် ၃ ဦး လုယက်ခံရ
နေရပ်ပြန် အလုပ်သမားများအတွက် ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည...
အာ​ဖ​ဂန်​တွင်​ ကင်း​လှည့်​​ လုပ်ငန်း​များ​​ အ​တွက်...
ဖုန်းနှင့်တွဲဖက်သုံးစွဲနိုင်သည့် Bluetooth ပါ နာရီ...
Online Logo Creater / Desinger Tools Webs
ဟက်ကာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ....
Top Week hack tools
Myanmar music, mp3, mtv, classic
window7genuine ပြုလုပ်နည်း
Windows7Ultimate SP1 (32 Bit & 64 Bit) ISO နှင့်...
Windows 8 Metro Themes7Free
အိုင်တီ နည်းပညာ များကြားက တိုက်ပွဲများ
Crack နှင့် Key များရှာဖွေခြင်း
chit oo May
MR. SOEEOM'S PRESENT WORDS
အစကတော့ လူတွေက အကျင့်တွေ ကိုလုပ်တယ် နောက်တော့ အကျင့်တွေက လူတွေကိုပြန်လုပ်သွားတယ် အကျင့်တွေကလူတွေကို ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သင့်ဆီမှာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိနေစေချင်ပါတယ် အရာရာအားလုံးဟာ အလေ့အကျင့်ကနေ အလေ့အထဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားတတ်မြဲပါ ဒါကြောင့် သန်ရာသန်ရာကို အလေ့အထ ဖြစ်အောင်များများလေ့ကျင့်ပါ မျှော်လင့်ချက်တွေရှင်သန်ပါစေ
<!-soemoe's blog-http://soeeom.blogspot.com--> မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအသိပေးမျှဝေစေချင်ပါတယ်၊
Facebook and another
ပြင်တဲ့နေရာလေးပါ. Powered by Blogger.